Mustaf Cumar: "yeeli mayno in cid kale noo macnayso taariikhdeenna" - Halbeeg News
Mustaf Cumar: “yeeli mayno in cid kale noo macnayso taariikhdeenna”
MUQDISHO (HALBEEG) – Madaxwaynaha Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Musutaf Muxumed Cumar, ayaa sheegay in aan marnaba la illaawi doonin halgankii xornimo-doonka ee ka dhacay gobolka Soomaalida sannadkii 1977.
Qooraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuu ku sheegay in halgankaasi ahaa mid xalaal ah, isagoo xusay in marnaba shacabka Deegaanka Soomaalidu aqbali doonin in loo sheego taariikh aan middooda ahayn, waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Dhamaan halgammadii Soomaali Galbeed waxay ahaayeen guumaysi-diid xalaal ah. Dagaalkii 1977kii wuxuu ahaa uun marxalad ka tirsan halgamadaa lagu diidanaa guumaysiga. Waa inaan ka run sheegnaa taariikhdeena oo aan diidnaa in cid kale inoo macneeyso taariikhdeena” Mustaf ayaa sidaas ku yiri qoraalka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Hadalka Madaxwayne Mustaf ayaa kusoo aadaya maalmo kaddib markii uu sheegay in xus baroordiiq ah loo samayn doono kumannaankii Soomaalida ahaa ee iyagoon waxba galabsan uu laayey maamulkii hore ee gobolka iyo kuwii la dilay iyaga oo ku jira halganka gobanimo-doonka.
Madaxwaynaha cusub ee Deegaakna Soomaalida ayaa horay u taageeray mabda’a Soomaali weyn, isagoo xusay in dadka Deegaanka Soomaalidu qayb ka yihiin bulshoweynta Soomaaliyeed, siyaasad ahaanse raacsan yihiin dalka Itoobiya.
Ra'iisul Wasaaraha iyo Guddoomiyaha Baarlammaanka oo booqasho ugu tegey Xildhibaan Booroow
Somaliland oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shahaadiga